Ngiyakuthanda ukuklama, kepha ngingumklami omubi. Ngiyakuthanda ukuthuthuka, kepha ngiyinkohliso impela. Futhi ngibhala nsuku zonke ku Martech Zone futhi sengibhalile Ukubhuloga Kwebhizinisi KwamaDummies, kodwa angizihlukanisi njengomlobi. Kepha ngibona ukwakheka okuhle, ngishaywa umoya yintuthuko enkulu, futhi ngiyakuthanda ukubhala okuhle. Sisanda kwethula isiza esisha sebhizinisi se- DK New Media, ngakho-ke lesi seluleko esivela I-Thinkshift isikhathi esiphelele sokuthi singabelana kanjani ngendaba yenkampani yethu. Silandele iseluleko sabo!